Toban sano ka hor aniga iyo xaaskeyga Marie oo wiilkayaga Joel dhintay | Apg29
Toban sano ka hor aniga iyo xaaskeyga Marie oo wiilkayaga Joel dhintay
Toban sano ka hor, on 21 December dilay xaaskeyga wax yar ka hor 12h habeenkii iyo ina our nyförlöste Joel tan iyo badh dhintay ee la soo dhaafay afar subaxdii of 22 December.
Laakiin on dhagax xabaal ah ayaa sheegay in labada dhintay December 22, 2008. xabaashii waa in Jönköping oo laga helay Xabaalaha Woodland ee. In xabaashii waxaa jira laba wada karfano maran cad. xabadka ballaaran A, iyo sanduuq yar oo u taagan on waaweyn ah.
Haddii dhacdooyinkan, ayaan qoray kitaabkii habeenkii ugu dheer. Waa dhaqaaq iyo buugga aad u riwaayado iyo murugo, balse tilmaamay in rajadii dhaldhalaalaya oo Ciise Masiix. wali waxaad ka heli kartaa buugga haddii aad rabto in aad ka dalban. Waxaa kaaga 150 karoon. Waa sidaas raqiis ah si aan waxba ku dul waxaan kasban. Buuggu wuxuu ku siinayaa raaxada iyo dhiirigelin iyo dhibcood si ay u rajaynayaa in Ciise Masiix. Sidoo kale waa evangelisationsbok aad u fiican. Adigu soo iibso ama ku siin qof sida hawl hadiyad ah.
Buuggan waxaa loo yaqaan habeenkii ugu dheer, maxaa yeelay, waxay ahayd habeenkii ugu dheer ee sannadka iyo habeen ugu dheer ee noloshayda.
Laga soo bilaabo buugga Night dheer
Noo sariirta ayaan ku fadhiistay oo shaqeeyay on site blog aan. Waxay ahayd badh la soo dhaafay kow iyo habeenkii. In i hor lahaa ayaan naftayda biimeeyey laptop miis yar oo ka samaysan alwaax in burburto laga yaabaa. aniga mooyaane ahayd naagtii aan jeclahay iyada caloosha weyn oo akhriyey wargeys. In qolka ku xiga to our qol jiif ahaa Dessan iyo seexday isagoo sariirta ku. Wax kasta oo ay ahayd mid deggan, wax walba oo ahayd mid nabad ah, oo wax walba waa hagaagsan. Sida ay soo dhawaaday masiixiga ah ayaan kula salaan Christmas iyo sannadka cusub soo shaqeeyay oo ku qoran luqado badan oo kala duwan sida aan rabay in aan ku my blog. Markii aan la shaqeeyo on my liiska Marie ilaa duubnaadaan wargeyska oo ku yidhi:
"Waxaan kor ugu tegayaa sariirta."
Marie khuurada iyo hadda marka waxay ahayd uur weyn, iyada khuurada ka xun. Si aan si i dhibin ay doonaysay inay sariirta tago qol kale. Sharciga u diyaariyey in Hal weyn la simi oo uu dhigay sariir soo socda in ay miiska. Laakiin sabab qaar ka mid ah ma aanan qabaa Marie caawa hurdo tegi lahaa qol oo kala duwan.
"Aad ma joogi karaa?" Markaasaan weyddiiyey. Laakiin way ku sii adkaysatay in ay doonayeen in ay ku seexdo oo uu hoolka.
"Hagaag," waxaan ku idhi, "laakiin markii aad u tagto musqusha aad si fiican ii si aan hore ha fadhiisan, waayo, wakhti dheer buu la computer ah '' Haa, Waxaan sameyn doonaa in," ayay tidhi, ka tagay qolka oo soo xidhay albaabka.
Waxaan sii waday in ay qori aan liiska Christmas iyo sannadka cusub xidhiidhada godka aan ku fikiray inaan ku daabacaan. Waxaan ahaa ma ku siiyey in this nabad fiidkii daqiiqad gabi ahaanba bedelay lahaa marka albaabka qolka hurdada si lama filaan ah u furay, wax yar ka hor laba iyo toban SFIga oo habeenkii, iyo Marie galay. Markii aan ka soo screen computer ah u eegay, oo wuxuu arkay Marie, Waxaan u maleeyay in oh si fiican, waxa ay ahayd markii si ay u joojiyaan.
Waxa ay ahayd wax waadaxa la soo dhaafay ayay tiri. magacayga Waxay sheegtay in la midab ah oo aad u jecel, hab tur iyo qurux. Oo markay u jiifsaday, waayo, in yar oo ah. Waxaan labada wuu arkay wuuna ogaa in ay ahayd in xanuun.
"Ma idiin tahay wakhti for BB?" Waxaan weydiiyay, halka weli aan kaga tegey laptop ah miiska alwaax yar.
Waxay sheegtay in ay wax ku dhowaad galayey la ii sheegay in aan aan u fududeyn karo oo jiifsaday xitaa ka sii badan, weeraryahanka laaban xanuun. Waxaan si dhaqso istaagay, kor u tegey iyadii oo soo qabtay iyadii yeelay, iyadu ma dhici lahaa dhulka. iyada ayaan keentay in cagta ee sariirta double iyo si tartiib ah hoos dhinaca dhigeen, halka aan joogo madaxayga bilaabay in la raadiyo telefoonka si BB.
Sida aan halkaas isla taagay at cagta ee sariirta, ee hore ee sariirta ilmaha aniga iyo Dessan geliyey si ay si fiican oo been Marie naga dhigteen sariirta guud, Waxaan u suurtagashay in aan raadiyo tiro kasta phone in aan xasuusta waayo seconds badan oo ilaa Marie si lama filaan ah waxay bilaabeen inay si xoog leh u dhaq la Heesta a wiswis leh iyo dhawaaqyo qeexnayn. Anigu ma aan runtii ma oga waxa aan sameyn lahaa, laakiin ay dabiicadda ayaan ka fikiray, waxa ugu fiican iyada oo ilaa on sariirta. hore baan u xootay, qabteen iyada iyo ku riday ilaa. Kolkaasay ku tidhi hoos kubad ka cagta ee sariirta dabaqa intii aan weli iyada oo haysta gacmaheyga.
Anigu ma aan ka dibna waxa ay u fahmaan, laakiin meesha Marie dhintay gacmaheyga. Waxa la soo dhaafay ayay tiri aan magiciisa la odhan jiray, tan iyo markii ay ku dhintay gacmaheyga.
Habeenka December 22, habeenkii la saacadaha ugu gudcur 2008, xanuunsadaa Christer Åberg habeenkii ugu dheer ee uu noloshiisa, markii uu ahaa mid aad u argagax leh oo lama filaan ah u lumiya qoyska badhkood.
Sheekada A dhabta ah ee ka khasaare aan la qiyaasi karo oo loo dhan ku guuleysto.
Dad badan ayaa ka maqlay oo goob joog sida si adag uga welwelsan ay marka ay kitaabka ku akhriyey, habeenkii ugu dheer. Hal qof iga qoray in:
"Waxa buug fiican aad qortay. Markii aan bilaabay in aan akhriyo ma joojin kari lahaa. Waxaan ahaa si taabtay."
habeenkii ugu dheer
Habeenka December 22, habeenkii la saacadaha ugu gudcur 2008, xanuunsadaa Christer Åberg habeen dheer oo mugdi uu nolosha, markii uu ahaa mid aad u argagax leh oo lama filaan ah u lumiya qoyska badhkood.
Waxaan raaci nin keliya iyo iimaan liicliicashola'aan, iyo rumaysadka iyo isku halleeya Hanuunka Eebe iyo daryeel marka lagu fekeri karin ka dhacaya iyo si lama filaan ah uu kala adduunka.
Buuggu wuxuu sidoo kale waa sheeko kulul Qisadii jacaylka ku saabsan search Christer Åberg ee Ilaah, in uu jecel yahay jacaylka nolosha-dheer iyo riyadiisa ah hal maalin dambeyntii dareemaan in si dhab ah u jeclaaday oo la doonayo.
SHEEKO Caaro KA HABEENKII ugu dheer
markii ugu horeysay waxay ahayd xun. Waxaan ku noolaa lama filaan ah aad u weyn iyo ma aan aqoonin sida loo maareeyo xaaladda, mana waan ogahay sida aan la gabadhayda kuwaas oo kaliya ku qayliyey oo qayliyeen oo waxay ku qaylisay ka qaban lahaa ...
Waxaan lahaa si sax ah u sameeyey waxa wadaadku wuxuu igu lagula talinayaa in ay markii aan la weydiiyey waxa aan dhihi lahaa in Dessan:
"Si sax ah ii sheeg sida ay tahay. Waxaad carruurtiinna ha ka dhab badbaadin karaa."
Sidaas daraaddeed waxaan u sheegay Dessan hooyaday in uu dhintay, ayay waxay ahayd in samada Ciise iyo lahaa marna guriga haddana u soo noqdo. Marka ilmuhu xanaanada ka dib iyada oo la weydiiyay halka ay hooyadeed ahaa, ayay ku jawaabay:
"Waxay waa dhintay, waana la Ciise oo jannada ku jira."
Laakiin hadda uun ku dhawaaqay oo wayna qaylisay. Waxay ahayd in qoysanku iyo, ma aan ogayn waxa aan sameyn lahaa inaan la. Waxaan galay qol la Dessan gacmaheyga. Waxay ku qayliyey oo uu wajiga ka dhanka ah ayaan garbaha ku jiifay.
"Waxaan wax kuu gabyi doonaa?" Markaasaan weyddiiyey.
"Haa," ayay ku jawaabay cod ilmo raxiimka ee.
Waan ogaa Dessan jeclaa heesaha fiican Halleeluuya aad ku nooshahay oo igu taal. Waxay isticmaalaa in lagu had iyo jeer jeclaan lahaa in markii aan iyada la weydiiyay hadii anigu waxaan ka gabyi kari lahaa wax. Waxay ugu baaqday Hadduuse Jirin Halleeluuya aad ku nooshahay oo igu taal oo, laakiin waxay had iyo jeer ku yidhi, "waxaad ammaani." Sida ugu dhakhsaha badan ayay u isticmaalaa in la yidhaahdo "ammaanayaa aad" isla markiiba waxa song ayay loogu tala galay waan ogaa. Aniga qudhaydu waxaan helay song ah. Waxaa haboon labada dadka waaweyn iyo caruurta.
Maxaan anigu waxaan ka gabyi? "Waxaan weydiiyay Dessan, dhaadhacsan in ay doonayeen in ay iga gabyi kaliya song in.
Laakiin si aan lama filaan ah, ayaa sheegay in Dessan oohin dhameystirtay:
caaro? Itsy Bitsy Spider? "Ma ahan xitaa song a Christian. Laakiin waxaan u gabyeen waayo, Gabadhaydiiyey, intii aan iyada la jiray gacmaheyga Ivar guri weyn.
Down yimid roobka
ka soo maydho caaro.
Up yimid qorraxda
wada qallajin doonaa roob oo dhan.
mar dambe la soo fuulin.
Tani waxa ay ahayd wacdintii xad ah ii. Markii aan ku gabyeen gabay si rinji dhacdada la caaro in maskaxdayda. Waxaan arkay sida uu ku dhibtooday inuu fuuli dunta. Laakiin lama filaan ah musiibada. roob u yimid oo ku caaro iska dhaqday. Laakiin markaas yimid mucjiso - mucjiso ah! Oo qorraxdii waxay ku kacay oo wuxuu u engegay roobka oo dhan si caaro sii dhiirranaaday, oo uu bilaabo laga yaabaa inuu mar kale fuulaan.
Sidoo kale, ka Dessan iyo ayaan soo gaartay musiibada, laakiin qorraxda, Ciise kaco oo noo siinayaa geesinimada cusub, si la qabtay cusub oo xoog leh ayaa mar kale dib u fuuli.
Ka dib markii aan ku gabyeen gabaygan qayliyey Dessan mar dambe.
- Hubi qiimaha!
150 karoon / kasta
3 buugaag: 300 karoon
account Bank: 8169 in 5,303 725382-4
FIIRO GAAR AH: Ku qor cinwaanka aad!
Buuggu wuxuu soo kaxaystay toban bilood oo aad ku qor, laakiin waa mid aad u fudud in uu akhriyo iyo waa ku haboon labada dadka da'da yar iyo ka weyn, iyo sidoo kale sidii a hadiyad ama evangelisationsbok !
Christer Åberg ku nool Meadow, meel u dhow Nässjö la gabadheeda dooni. Sanado badan uu ordo mid ka mid ah goobaha blog gaar ah ugu weynwww.apg29.nu . Waxa uu sidoo kale ka shaqeeyaa sida wacdiye iyo lug gabay, music iyo wacdiyaya shirarka ee wadanka oo dhan.
Buuggan waxaa lagu daabacay on Semnos daabacayaasha.
Soo xigtay habeenkii ugu dheer
Waxaan dareemayaa maanta dareen ahaan si fiican, laakiin dhacdooyinkii habeenkii ugu dheer had iyo jeer iman doonaa ila. Laakiin sida aan aniguba ku qoray kitaabkii: Ciise Without, anigu weligay ka dhigteen lahaa.
Vecka 38, måndag 16 september 2019 kl. 04:38